ပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုဝီလ်မင်တန်, DE လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ
ငါ့ကိုအနီးပုဂ္ဂလိကဂျက် Air ကိုပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုဝဲလေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီ
ကလိုပဲသို့မဟုတ်မ, လေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားလာအချိန်များတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တခုဖြစ်ပါတယ်. ထိုကွောငျ့, သငျသညျအခွင့်အလမ်းထဲကအများဆုံးလုပ်ရန်ရှိသည်. အများဆုံးလေကြောင်းလိုင်းများပထမဦးဆုံးအတန်းအစားနှင့်စီးပွားရေးအတန်းထဲတွင်ဖောက်သည်ခြွင်းချက်န်ဆောင်မှုများပေးသော်လည်း, အလိုရှိကြသည်တွင်ပိုမိုနေဆဲလည်းမရှိ. အကျိုးကျေးဇူးများအများဆုံးစီးပွားဖြစ်လေကြောင်းလိုင်းများအတွက်အကျိုးအမြတ်ကျော်ဖြတ်အဖြစ်တစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်သည်လေထုစင်းလုံးငှားပထမဦးဆုံးအတန်းအစားဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုအဆင့်မြှင့်ဖြစ်ပါသည်. သငျသညျဝီလ်မင်တန်ဝဲရှိငှားပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်, ကျနော်တို့ကိုခေါ်ခြင်းလေထုဂျက်စင်းလုံးငှားကုမ္ပဏီများမှာ 302-725-0800 ချက်ချင်းကိုးကားများအတွက်.
သင်ကလုံခြုံရေးရှင်းလင်းရေးများအတွက် takeoff ရှေ့တော်၌ထိုလေဆိပ်နာရီအချိန်တွင်ရောက်ရှိမည် inconveniencing ရှာတွေ့သလား? လုံခြုံရေးလိုင်းများမှတဆင့် Going အချိန်ကုန်ဖြစ်ပါသည်. အခြားစိုးရိမ်သငျသညျအချိန်ပေါ်အဲဒီမှာမရကြပါလျှင်သင်သည်သင်၏ပျံသန်းလက်လွတ်နိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်သည်လေထု Chartered နှင့်အတူ, သို့သော်, သငျသညျအသေးစိတ်လုံခြုံရေးရှင်းလင်းရေးဖြတ်သန်းသွားရန်မလိုပါ. အစီရင်ခံနှင့် ပတ်သက်., သင်သူဌေးများမှာနှငျ့သငျပျံသန်းဖို့ဘယျအခြိနျဆုံးဖြတ်ရ.
2. အပို Baggage ကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်ခြင်းမရှိပါ
သငျသညျပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်လေယာဉ်တင်စင်းလုံးငှားဝီလ်မင်တန်ဝဲပျံသန်းဝန်ဆောင်မှုကိုငှားရမ်းပြီးတာနဲ့, သငျသညျယာယီဂျက် 'ပိုင်ဆိုင်' '. ဒါဟာသင်မသက်ဆိုင်ဘဲမူလကဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့သင့်ရဲ့အိတ်ကိုသယ်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်. သင်တို့သည်လည်းမရှိ, အပိုစွဲချက်များမှာသင့်မိသားစုနှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ပျံသန်းဖို့ get.
3. In-ပျံသန်းမှု Service ကိုခြွင်းချက်
ဖျော်ဖြေရေးအနေဖြင့်အစားအစာ, သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုခံစား. သငျသညျကိုဗီဒီယိုဖျော်ဖြေရေးသုံးခွင့်ရှိသည်, ဂီတ, နှင့် Wi-Fi ကို. အစားအသောက်နှင့် ပတ်သက်., သင် onboard ကိုစားလိုဘာမှရှိနိုင်ပါသည်. အဆိုပါဂျက်လေယာဉ်ထဲမှာဤမျှလောက်ခြေထောက်အာကာသရှိပါတယ်, နှင့်သင့်ပတ်လည်လမ်းလျှောက်နိုင်ပါတယ်.
မည်သည့်အချိန်တွင်မငျသညျငါ့ကိုဝီလ်မင်တန် DE အနီးရှိနောက်ဆုံးမိနစ်ဗလာခြေထောက် oneway အာကာသစာချုပ်လိုပါက, ကျွန်တော်စဉ်းစားရန်လေစင်းလုံးငှားကုမ္ပဏီများမှာ. ကျနော်တို့တတ်နိုင်နှုန်းထားများမှာအကြီးမြတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအာမခံ.
ဒါ့အပြင်နယူး Castle ကောင်တီအဖြစ်လူသိများဂျက်ယင်ကောင်လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများအတွက်အများပိုင်နှင့်ပုဂ္ဂလိကလေဆိပ်များစာရင်း https://www.atlanticaviation.com/location/ILG
ဝီလ်မင်တန်, Montchanin, Rockland, Penn Grove, ရေနက်ပိုင်းရေနံ, Winterthur, နယူးရဲတိုက်, Claymont, yorklyn, Pennsville, Pedricktown, Hockessin, Chadds Ford ကား, Marcus Hook, အရှေ့တောင်, Newark, Aston, Thornton, Chester မြင့်, Glen Mills က, gradyville, Concordville, Kemblesville, Mendenhall, ဝဲစီးတီး, Bridgeport, Swedesboro, Chester, Kennett Square ကို, Brookhaven, ဝက်ဝံ, Toughkenamon, Landenberg, Pocopson, Cheyney, Avondale, Glen ပုစ္ဆာ Lima, Lenny, စိန့်ဇော့, Woodstown, Crum Lynne, Wallingford, အနောက်က Chester, လမ်, Woodlyn, Westtown, မီဒီယာ, Quinton, ဆိပ်ကမ်း Penn, Gibbstown, Ridley ပန်းခြံ, Swarthmore, Harrisonville, ဆတ် Mills က, Folsom, Alloway, Mickleton, အလားအလာပန်းခြံ, Essington, Morton, အနောက် Grove, Norwood, ကေတီဟုမ်း, Elkton, Springfield, Mullica ဟေးလ်, နယူးလန်ဒန်, Glenolden, Paulsboro, Folcroft, Philadelphia တွင်, Clarksboro, Hancock တံတား, Edgemont, Kirkwood, Newtown ရင်ပြင်မှာ, Clifton မြင့်, လင်ကွန်းတက္ကသိုလ်က, ရှာရုန်ဟေးလ်, Ewan, တောင်ပေါ်မှာတော်ဝင်, Lewisville, Broomall, Kelton, Darby, Middletown, Drexel ဟေးလ်, Mantua, Richwood, Immaculata, Odessa, Lansdowne, Modena, Lionville, Havertown, Thorofare, ကလေး, Malvern, Thorndale, အထက် Darby, Paoli, Berwyn, Exton, Wenonah, အမျိုးသားဥယျာဉ်, Cochranville, Chesapeake စီးတီး, Downingtown, Woodbury မြင့်, Monroeville, Coatesville, Devon, Pitman, Deerfield လမ်း, Wagontown, Ardmore, Wynnewood, Haverford, အောက်စဖို့ဒ, Bryn Mawr, Glassboro, Woodbury, Villanova, ဝိန်း, Sewell, ရှိလောမြို့၌, Westville, Pomeroy, အရှေ့မြောက်, Elmer, Merion ဘူတာ, Warwick, Narberth, Chester Springs, Sadsburyville, Parkesburg, ချိုင့် Forge ရဲ့, Devault, သပိတ်, Kimberton, Townsend, Clayton, Gloucester စီးတီး, ဗလ Cynwyd, ဂရင်းနစ်, Gladwyne, Charlestown, Bellmawr, Bridgeton, Grenloch, ရှား၏ရှငျဘုရငျသ, Runnemede, ဧဖရိမ်တောင်, Uwchland, Blackwood, ကန်ဒန်း, Glendora, Atglen, Glenmoore, Conshohocken, Phoenixville, Brandamore, Rising Sun က, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham, Franklinville, Oaklyn, ဟက်ဒေါ်မြင့်, Audubon, Bridgeport, Mont Clare, Barrington, Audubon, Birchrunville, ခရစ္စတီးနား, Lyndell, Magnolia, Collingswood, Fairview ကျေးရွာရှိ, နောရစ်, ဂါ, Lafayette ဟေးလ်, Somerdale, Rosenhayn, Kirkwood, cecilton, Lawnside, အုပ်ချုပ်, Stratford, Haddonfield, Perryville, Plymouth အစည်းအဝေး, ပျားရည် Brook, အရောင်အဆင်း, Sicklerville, ဆိပ်ကမ်း Deposit, Clementon, Eagleville, အပေါက်, Merchantville, Fairton, ပယ်ရီ Point သို့, နွေဦးစီးတီး, Pennsauken, Smyrna, Bart, Earleville, ချယ်ရီဟေးလ်, Newfield, Flourtown, Suplee, Collegeville, Galena, ဂျော့တောင်း, Gibbsboro, အပြာရောင်ဘဲလ်, Royersford, Williamstown, Arcola, Elverson, Kinzers, Voorhees, Wyncote, က Parker Ford ကား, Elkins ပန်းခြံ, Glenside, Oreland, Cheltenham, Conowingo, Havre De ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း, Massey, ဘာလင်, အာရဇ်ပင်တို့ကို, Creamery, Pottstown, Vineland, စိန့်ပီတာ, မေပယ်အရိပ်, ဝိန်း Fort ဝါရှင်တန်, အနောက်ဘာလင်, Worcester, Palmyra, Quarryville, Peach အောက်, နတ်ဘုံနတ်နန်း, Clayton, Cedarville, Jenkintown, Riverton, Skippack, Gwynedd ချိုင့်, အနောက် Point သို့, အာရဇ်ပင် Brook, Goodville, Ambler, Morgantown, Narvon, Abington, နွေဦးအိမ်, Dresher, Minotola, Geigertown, Moorestown, Landisville, Marlton, Gwynedd, မြောက်ကိုရီးယားဝေလ, Kenton, Atco, Kennedyville, Cheswold, Schwenksville, မိုးမခ Grove, Gordonville, Refton, Grou Proving Aberdeen, Darlington, Kulpsville, Millville, Strasburg, Winslow, Ronks, Lansdale, Waterford အလုပ်လုပ်, Aberdeen, တောင်ပေါ်က Laurel, Millington, Huntingdon ချိုင့်, မြစ်ကမ်း, နွေဦးတောင်ကို, New Providence, Betterton, အရှေ့ Earl, Montgomeryville, Horsham, Zieglerville, ကောင်းသော, Bryn Athyn, Harleysville, Newport, Drumore, နယူးဟော်လန်, Douglassville, Hatboro, အပြန်အလှန်ဆက်ဆံခြင်း, အပြာရောင်ဘောလုံး, အဘိဓါန် Creek ဝေဖန်, Newtonville, သို့တိုင်ရေကန်, Sumneytown, Woxall, Soudersburg, Witmer, Lampeter, Churchville, Terre ဟေးလ်, Birdsboro, Perryman, တိုက်, Salfordville, Earlington, Lederach, ထင်းရှူး Forge ရဲ့, Gilbertsville, Hatfield, ဒိုဗာ, Medford, Fortescue, Crumpton, Richland, Bowmansville, Little က Creek အဘိဓါန်, Perkiomenville, Colmar, Holtwood, Warminster, Smoketown, Beverly, Sudlersville, လက်ခုနှစ်တွင်ငှက်, Franconia, Willingboro, Rancocas, ဖရက်ဒရစ်, Souderton, Whiteford, Monocacy ဘူတာ, Warrington, လိုင်း Lexington, Bensalem, Belcamp, Earlville, ရောနှော, Feasterville Trevose, မိုးမခလမ်း, Hartly, sassamansville, Hammonton, Chalfont, Mohnton, Hainesport, နယူး Berlinville, မြစ်ဝကျွန်းပေါ်, Boyertown, ဆိပ်ကမ်း Norris က, Telford, ဆောက်သမ်တန်, Leola, ဒိုဗာလေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကို, ဆိပ်ကမ်းအဲလစ်ဇဘက်, Salford, အစိမ်းရောင်လိန်း, Croydon, Worton, Lumberton, Talmage, ဗေလ Air လေကြောင်းလိုင်း, Pequea, Mauricetown, လမ်း, မိဇပါမြို့, Jamison, Templeville, Martindale, တောင်ပေါ်က Holly, Hilltown, Lancaster, ဘာလင်တန်, Richboro, Bausman, အနောက် Willow, လို့ Abingdon, Adamstown, Marydel, ဧဒုံဟေးလ်, စာဖတ်ခြင်း, Dorchester, Bechtelsville, ဘားကလေး, Brownstown, Silverdale, ကန်ဒန်း Wyoming, Reamstown, ဒေါ်ရသီ, Sell​​ersville, Bristol က, Ephrata, Pennsburg, Leesburg, Langhorne, Akron, Chestertown, Conestoga, Levittown, Marydel, Elwood, Edgewood, Lumberville, သစ်တော Grove, ဖာလုံ, Mays ကမ်းတက်, Vincentown, Doylestown, Bally, Airville, Denver, Barto, Oley, သစ်တောဟေးလ်, Woodside, Estell Manor, Spinnerstown, Milford ရင်ပြင်မှာ, Tylersport, အရှေ့ဂရင်းဗိုင်း, Reinholds, Heislerville, Magnolia, Penryn, Millersville, Fountainville, Pylesville, Perkasie, Wycombe, Stevens, စျေးနှုန်း, ယမ်းမှုန်, ဘာမင်ဂမ်, Trumbauersville, ဖလော, ဒပ်ဘလင်မြို့, ဒရယ်ငယ် Grove, Glen Blooming, Henderson, Limekiln, Ingleside, Newtown, ယုပ္ပေ, Viola, ဘာကင်ဟမ်, လက်ဝါး, ဘုရားကျောင်းဟေးလ်, Fairless တောင်တန်းများ, Benson, Delmont, Roebling, Holicong, Rushland, Pineville, Penn ပန်းခြံ, Frederica, Brogue, Fallston, Jarrettsville, Hereford, အရှေ့ပီတာစဘတ်, အထက်ရေတံခွန်, Pemberton, Lititz, Wernersville, Quakertown, Tuckahoe, Kingsville, ဗိမာနျတျော, Zionsville, Felton, Jobstown, ကိုလံဘတ်စ်, နယူးပန်းခြံ, Juliustown, နယူးလစ္စဘွန်း, Morrisville, Bedminster, Goldsboro, လိုက်လံ, ကြက်ဥဆိပ်ကမ်းမြို့, Woodbine, Fleetwood, Elm, Hopeland, Mountville, အမဲချိတ်, ဝါရှင်တန် Boro, ပွိုင့်သာယာသော, Danboro, Gardenville, Plumsteadville, Craley, နယူးမျှော်လင့်ချက်, Hyde, Bordentown, Blandon, အဖြူနားမှာ, Kleinfeltersville, ဝါရှင်တန် Crossing, Landisville, လိုင်ယွန်ဘူတာ, Alburtis, Richlandtown, Baldwin, အဟောငျး Zionsville, အရှေ့တက္ကဆက်ပြည်နယ်, Solebury, Pipersville, Trenton, Bower, Mertztown, Robesonia, Cologne, ပယ်ရီခန်းမ, long ကအစိမ်းရောင်, Zionhill, Limeport, Topton, Leesport, အလယျပိုငျးမြစ်, Coopersburg, Macungie, Felton, Titusville, Chatsworth, Glen Arm, အရှေ့ Prospect, ကိုလံဘီယာ, Lahaska, Rosemont, Carversville, Newmanstown, Ottsville, ဒန်းနစ် Ville, တောင်ပိုင်း Seaville, White ကခန်းမ, Centerville, Manheim, ဂရင်း, အညိုရောင် Mills က, Lambertville, ဒဲနစ်တောင်, Emmaus, ရော့ခ်ဂီတခန်းမ, Wrightsville, Maxatawny, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham, Crosswicks, ဝင်ဆာ, Schaefferstown, Stewartstown, Wrightstown, ကြက်ဥဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်, ရို, Virginville, စင်တာချိုင့်, Womelsdorf, ဂေါရှင်, Trexlertown, Kutztown, Pomona, Breinigsville, Essex, Monkton, Phoenix မြို့, Shoemakersville, Milford, အနီရောင်ခြင်္သေ့, Harrington, Cookstown, ကြောရိုး, Mohr Ville, တောင်ပေါ်ကရွှင်လန်း, Centerport, Sergeantsville, ဖွစျတဲ့စတော့ချ, Pennington, ဟူစတန်, Allentown, သမုဒ္ဒရာကိုကြည့်ရန်, Marmora, ဆိပ်ကမ်းသမ္မတနိုင်ငံ, Kintnersville, Rosedale, Oceanville, Somers Point သို့, Parkville, Richland, Springtown, Erwinna, Bernville, Linwood, Absecon, မေရီလန်းလိုင်း, York မြို့, Cornwall, Northfield, Marietta, နယူး Gretna, ကိပ်မေလတရားရုံးအိမ်, ဘုရင်မအန်း, Villas, Dallastown, Fogelsville, Parkton, Allentown, စာငှက်ပွိုင့်, အထက်က Black Eddy, Baltimore, Pleasantville, Lehigh ချိုင့်, Rexmont, Maytown, Hellertown, Towson, Durham, Frenchtown, Shrewsbury, Baptistown, Hunt ကချိုင့်, Quentin, နယူးလွတ်မြောက်ရေး, တောင်ပေါ်က Gretna, Hillsboro, ဝိန်း Fort Howard, Lenhartsville, ဗက်လင်မြို့, Strathmere, သမုဒ်ဒရာစီးတီး, ဟမ်းဘတ်, Riegelsville, Hopewell, Lutherville Timonium, Riderwood, Rheems, Dundalk, Myerstown, Whitesboro, Cockeysville, ပင်လယ်ပြင်ကျွန်းစီးတီး, Stony Run ကို, Glencoe Sparks, နယူးအဲဂုတ္တုပြည်၌, သံလမ်း, Shartlesville, Orefield, Rio Grande, လေဗနုန်တော, လင်ကွန်း, တောင်ပေါ်က Aetna, ရင်ဂို, အစိမ်းရောင် Creek အဘိဓါန်, Longport, နျဒဲနျး, Rehrersburg, Freeland, Strausstown, Queenstown, ဝင်ဆာ, Margate စီးတီး, Loganville, မြက်ခင်း, Wye Mills က, Avalon, မုန့် Ridge, Princeton လမ်းဆုံ, Ventnor စီးတီး, ကိပ်မေလ, Kempton, Whitehall, လိဒ် Point သို့, Milford, ကျောက်ခေတ်ဆိပ်ကမ်း, ဘဏ္ဍာစိုး, Elizabethtown, ကိပ်မေလပွိုင့်, ဆိပ်ကမ်းကလင်တန်, Princeton, Tuckerton, Cordova, Catasauqua, Greenwood, Glen ရော့ခ်, နယူးထရီပိုလီ, Little က York မြို့, Imlaystown, Blawenburg, မန်ချက်စတာမြို့နယ်, အတ္တလန္တိတ်စီးတီး, Bainbridge, Skillman, Coplay, ဗေသလမြို့, Grasonville, Wildwood, Schnecksville, Hightstown, ခုနစျပါး Valleys, တောင်ပေါ်က Wolf က, Ellendale, Flemington, Curtis ဂလားပင်လယ်အော်, Gibson ကျွန်း, Brooklandville, Stevenson, Emigsville, Plainsboro, Northampton, Roosevelt ရုစဗဲ့, Pittstown, Brigantine, Kingston, Campbelltown, ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဘူတာ, မန်ချက်စတာ, Neffs, ကျောက်တောင်ဟေးလ်, ဘရွတ်ကလင်း, Pasadena, Auburn, Easton, Chester, Cranbury, Annville, အနောက်အဘိဓါန် Creek, Clarksburg, နယူးယောက်နယူးလမ်, Perrineville, နာဆော, သုံး Bridges, Germansville, Pikesville, Bloomsbury, Barnegat, Palmyra, Fredericksburg, တပ်, လော်ရီဘူတာ, မီလ်တန်, Glen Burnie, Gwynn Oak, ထွင်းဖေါက်ခြင်း, Manahawkin, Landingville, Phillipsburg, Upperco, Orwigsburg, Quakertown, Lakehurst, Treichlers, Codorus, Neshanic ဘူတာ, Hershey, Halethorpe, Owings Mills က, Slatington, မန်ချက်စတာ, Stevensville, Glenville, Bridgeville, Asbury, အာနိုး, က, Belle Mead, Linthicum မြင့်, Schuylkill Haven, Hampstead, Slatedale, Glyndon, Reisterstown, နယူးယောက် Haven, Monmouth လမ်းဆုံ, Cherryville, နယူး Ringgold, Stewartsville, Friedensburg, မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်, ရေချိုးကန်, ဝင်ဆာစက်, Jonestown, Dayton, Severna ပန်းခြံ, Waretown, Annandale, Cressona, Walnutport, ပေါ်တာ Sideling, Middletown, နာဇရက်မြို့သား, Toms မြစ်, Flagtown, နွေဦး Grove, ကလင်တန်, Catonsville, Kendall ပန်းခြံ, Readington, Tatamy, Randallstown, Hillsborough, Preston, လမ်းဆုံလမ်းခွတွင်မြစ်, LINEBORO စားအုန်းဆီကြမ်း, Annapolis တွင်, Andreas, Lewes, Stanton တို့, Hummelstown, Franklin ဟာပန်းခြံ, Hanover, Stockertown, Hampton, ထင်းရှူး Grove, Etters, ဒိုဗာ, Millersville, Easton, သဲသောင်ပြင် Haven, မွန်ရိုးမြို့နယ်, Federalsburg, Danielsville, ဘရော့ဒ်ဝေး, ခြောကျ, ဇရတ်တမွို့, Beachwood, Thomasville, အမြင့်တံတား, Harman, Crownsville, Claiborne, Whitehouse ဘူတာ, Highspire, လေဗနုန်တော, Adelphia, Bowmanstown, Ashfield, စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးအိမ်, Tamiment, ဂျော့တောင်း, Severn, Somerville, ဆိပ်ကမ်းကြည့်ရန်, ဆိပ်ကမ်းကာဗွန်, Middleport, Finksburg, Elkridge, Grantville, Cumbola, Aquashicola, Pottsville, Helmetta, Ellicott စီးတီး, Woodstock, ထင်းရှူးသဲသောင်ပြင်, Bayville, Martins Creek အဘိဓါန်, အိမ်ဖြူတော်, Englishtown, Palmerton, မတ်လလင်း, Changewater, Harbeson, ဘုတ်သဲသောင်ပြင်, Lakewood, Manville, Saint Michael, မြောက်ကိုရီးယား Brunswick, Raritan, Brockton, နယူး Philadelphia တွင်, Parryville, Llewellyn, Lewisberry, Glen Gardner, မာရိသညျ: D, Seltzer, Mcdaniel, ဗက်လင်မြို့, Seaford, ကျွန်း Heights, Lehighton, စိန့် Clair, Minersville, Harrisburg, Tuscarora, Freehold, Newcomb, Hanover, ဝါရှင်တန်, Rossville, Spotswood, သမုဒ္ဒရာဂိတ်, Tamaqua, Barnegat အလင်း, Tremont, Branchdale, Wittman, Bridgewater, Howell, Somerset, Odenton, Milltown, Tennent, လေတိုက် Gap, Abbottstown, Marriottsville, ဝိန်း Fort ဂျော့ခ်ျ, G Mead, ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဟေးလ်, Edgewater, ကိုလံဘီယာ, Riva, Gambrills, Coaldale, Wellsville, Mayo အဘိဓါန်, အရှေ့ Brunswick, Westminster, Jessup, Hurlock, နယူး Cumberland, Lansford, Pluckemin, Brook ထုပ် ထား. တောင်ပိုင်း, နယူး Brunswick, Oldwick, Califon, muir, Annapolis တွင်လမ်းဆုံ, ခညျြနှောငျ Brook, Bozman, Crofton, အုတ်, တောင်ပိုင်းမြစ်, Sykesville, Buttzville, Bedminster, Barnesville, အောက်စဖို့ဒ, အဟောငျးတံတား, မာလ်ဘိုရို, မျှော်စင်စီးတီး, တော်ဝင် Oak, ထွက်ပေါက်, Martinsville, ရိုင်းသော, Sherwood, အဘိဓါန် Highland ပန်းခြံ, Belvidere, ဆိပ်ကမ်း Murray, တောင်ပိုင်း Md Facility, Lemoyne, Laurel, Middlesex, Pottersville, Shady ဘေးထွက်, အောက်စဖို့ဒ, Morganville, Hegins, Mahanoy စီးတီး, Farmingdale, Frackville, Piscataway, Simpsonville, Delano, Davidsonville, စခန်းဟေးလ်, Sayreville, Gilberton, အက်ဒီဆင်, Galesville, Williamstown, Gordon ကမြင်ပါတယ်, Mahanoy လေယာဉ်, Allenwood, ချိုင့်ကြည့်ရန်, ဝေးတောင်ကုန်း, Peapack, Neavitt, အနောက်ချစ်ကြည်ရေး, Colt လည်ပင်း, Dunellen, Gladstone, Bowie, အနောက်မြစ်, Shenandoah, Tilghman, Ashland, Clarksville, Girardville, Parlin, Churchton, Creek အဘိဓါန်ဆုံးရှုံးခဲ့ရ, Harwood, ရှည်လျားသောချိုင့်, လှုံ Ridge, Warren, Enola, Summerdale, လီယွန်, လွှတ်ခြင်းအခွင့်ထောင့်, Schooleys တောင်တန်း, Lavelle, Wiconisco, လိန်းဖီးလ်ဒ, Matawan, တောင်ပိုင်းလိန်းဖီးလ်ဒ, Sacramento, Lanham, Locustdale, Metuchen, တောင်ပိုင်း Amboy, Fulton, အဘိဓါန် Highland, Millington, Cliffwood, အပေးအယူ, နွေဦး Glen, Pitman, Wickatunk, Glenn Dale, Keasbey, Bernardsville, Watchung, ကျိုင်းကောင် Gap, Stirling, Chester, Dauphin, Aristes, Holmdel, Ford, Lykens, Marysville, Burtonsville, Spencerville, Lincroft, ပါ့သ Amboy, Gratz, တောင်ပေါ်ကရမေလတောင်, Klingerstown, Wilburton, Keyport, Tracy ကမ်းတက်, Hazlet, Gillette, Beltsville, Greenbelt, Iselin, သတ်ပေါက်ကြား, Halifax, Staten ကျွန်း, ဘာကလေမြင့်, Lothian, Kulpmont, Fanwood, Woodbridge, Elizabethville, Scotch Plains, Mendham, Colonia, မာရီယန်မြင့်, မြောက်အမေရိကကမ်းခြေ, Silver, နွေဦး, ဖလန်းဒါးစ်, Sewaren, အထက်မာလ်ဘိုရို, နယူး Vernon, Avenel, အမြီးအမောက်, Brookside, ချစ်ကြည်ရေး, Middletown, ကောလိပ်ပန်းခြံ, Keansburg, Hyattsville, Westfield, Clark က, Berrysburg, ဆိပ်ကမ်းစာဖတ်ခြင်း, New Providence, ဆိပ်ကမ်း Monmouth, Shamokin, Rahway, Dunkirk, အစိမ်းရောင်ကျေးရွာ, နယူး Buffalo, Rebuck, Riverdale, Chesapeake သဲသောင်ပြင်, တောင်ပေါ်ကလတ်ြလပ်ခ, ကျောက်မီးသွေးမြို့နယ်, Garwood, တောင်ပေါ်, Carteret, ခေါင်းအုံး, Cranford, Bladensburg, Owings, Chatham, Morristown, ဆန်းဒါးလန်း, ထိပ်သီးအစည်းအဝေး, Randolph, Linden, Madison, Dornsife, Millersburg, Brentwood, Elysburg, Kenilworth, ကက်ပီတောလ်မြင့်, Springfield, Roselle, တောင်ပေါ်က Rainier, Roselle ပန်းခြံ, Trevorton, ခရိုင်မြင့်, Herndon, ဝါရှင်တန်, မာ, Florham ပန်းခြံ, တိုတောင်းသောတောင်ကုန်းများ, ပြည်ထောင်စု, အဲလစ်ဇဘက်, အာရဇ်ပင် Knolls, မောရစ် Plains, Millburn, Andrews ကလေတပ် Bas, Paxinos, Vauxhall, Suitland, Whippany, တောငျကုနျး, Maplewood, Cheltenham, လီဗာပူးလ်, ဗိမာနျတျော Hills, Livingston, အရှေ့ Hanover, Irvington, Newark, ဆိပ်ကမ်း Trevorton, တောင်ပိုင်းလိမ္မော်ရောင်, ကလင်တန်, Bayonne, လိမ္မော်သီး, အရှေ့လိမ္မော်ရောင်, Brandywine, Roseland, အနောက်လိမ္မော်ရောင်, Oxon ဟေးလ်, Essex ကျဆင်း, Harrison, ဝဲလ်, Selinsgrove, ဒေါ့မွန်ဆိပ်ခံဗောတံတား, Shamokin ဆည်, ဝိန်း Fort ဝါရှင်တန်, Freeburg, Glen Ridge, Montclair, Verona, Bloomfield, Kearny, Waldorf, Belleville, မြောက်အမေရိက Arlington, Nutley, Kreamer, Lyndhurst, Clifton, ရပ်သဖော့ဒ